Maitiro ekumisikidza kuziva kurira muIOS uye iPadOS 14 | IPhone nhau
Maitiro ekumisikidza kuziva kurira muIOS uye iPadOS 14
Ngirozi Gonzalez | | iOS 14, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Zviratidzo zvekuwanika zvakare ingangoita poindi yekuvandudza mune ese maApple anoshanda masisitimu. Zvinogona kutaurwa kuti iOS neIpados ndiwo masisitimu maviri anoshanda ane huwandu hukuru hwemabasa evashandisi vane hurema kana huremo hwekushanda. Chimwe chezvinhu izvi zvitsva muIOS uye iPadOS 14 iri kucherechedzwa kwakanaka. Iri basa rinozivisa mushandisi kune imwe ruzha. Zvayo, chishandiso chinoona kuti ruzha rwupi kubva kune idzo dzinoitwa nemushandisi uye zvinoguma nekuzivisa. Tinokuratidza maitiro ekuita basa iri uye kurimisa nenzira kwayo.
Aya ndiwo maratidziro anoitwa mushe muIOS uye iPadOS 14
Kuzivikanwa kwenzwi kunoita kuti vashandisi vasina kunzwa ziva kana paine ruzha rwakakosha rwuri kutambiswa pauri. Muenzaniso weizvi unogona kunge uri maaramu emoto kana kana mwana achichema. Aya marira akaverengerwa neApple mune yayo nyowani ficha inonzi 'Kuzivikanwa kwenzwi'. Inowanikwa muchikamu chekuwanika. Zvisinei, inogona kushandiswa nevashandisi vese vanofunga kuti vanoda kushandiswa kwayo.
Kuita kuti basa iri riite unotevera matanho anotevera:
Pinda Zvirongwa iOS kana iPadOS 14. Iyi ficha inongowanikwa chete mune idzi shanduro, saka kana iwe usina yeruzhinji kana yekuvandudza beta yakaiswa, haugone kuishandisa.
Tarisa Chikamu Chekuwanika.
Paunenge uchinge uri mukati, tinya Kuzivikanwa kwenzwi mukati meiyo 'Kunzwa' chikamu.
Kuti tiite basa racho, tinosiya switch ichiitwa. Izvo zvichatizivisa isu kuti kuti chishande zvinodikanwa kuti basa racho riri kushanda Hesi Siri, iyo inobvumidza iyo iPad kana iPhone kuteerera kunze kwedu tisikudana iwe zvakananga.
Tevere tinodzvanya pa «Inonzwika» uye sarudza iyo mhere mhere yatinoda kugamuchira ma ziviso painotambwa munzvimbo yedu.
Uye wakagadzirira. Basa racho rave kugadzirira kuenda. Kuti uedze iyo, unogona kutsvaga mune chero bhurawuza kune ruzha iwe rwawasarudza. Kana iyo kifaa ikazvinzwa, ichagadzirisa kurira uye ichaburitsa ziviso kubva kune 'Ruzha kuzivikanwa' kunyorera. Kana iwe uchida kugadzirisa kuti aya ma ziviso anosvika sei, iwe unogona kuzviita kubva kuChiziviso chikamu cheIOS Zvirongwa.
Taura zvakare kuti kana isu tavhura basa iri widget yenzvimbo yekudzora inowanikwawo. Kubva ipapo tinogona kumisikidza uye kudzima basa racho, mukuwedzera pakusarudza mamwe kana mashoma maungira zvichienderana nemamiriro ezvinhu atinozviwana tiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Maitiro ekumisikidza kuziva kurira muIOS uye iPadOS 14
Bhatiri bvunzo: iOS 14 beta 4 vs iOS 14 beta 1 vs iOS 13.5.1 vs iOS 13.6
Facebook Kubheja ikozvino kunowanikwa kweIOS asi isina mukana wemitambo